Roast huku pane munyu Art sens - mazano eimba nebindu
08.06.2015 Yakatumirwa na: Art Sense
Kukurumidza, nyore, kunonaka!, Recipes
Iyi nzira yakapusa, ine hutano uye ine hupfumi inongoda huku imwe chete uye pack (1 kilogalamu) yemunyu wegungwa. Chakavanzika chekuravira kwakanyanya chiri mukukwanisa kwemunyu kugovera kupisa zvakaringana mukati mehuku yese. Izvi zvinogadzira chinonaka, chine juzi nyama neinonaka crispy ganda.
Dhavhara dhiza yekubheka nepepa kuti udzivise kuchenesa kwakaoma mushure. Dururira munyu uye ugopararira kuitira kuti danda rakaumbwa riumbwe pasi pani. Cheka huku kuburikidza nepakati pechipfuva uye munyu. Ravira nezvinonhuwira zvaunofarira zvehuku. Isa munyu nenzira inoratidzwa mumapikicha. Hapana mafuta anoshandiswa uye iyo yekubheka saka yakakodzera kwazvo kune zvikafu zvinopa nyama. Iyo haina kuvharwa nealuminium foil. Isa iyo tray mune preheated ovheni kuma 200 degrees, iyo grill yakadzika. Bika 1 awa uye maminitsi makumi matatu. Nyama yakagochwa zvakaenzana uye haina siki. Kana huku ichinge yabikwa, nyatsoibvisa pamunyu uye isa mune imwe mudziyo. Rasa bepa remunyu. Mune iyi yekubheka, munyu wegungwa unogona kutsiviwa nemunyu wekubika. Iwe unogona zvakare kubika huku yemakumbo kana mapapiro nenzira imwechete.
nyore nzira, munyu wegungwa, huku yakagochwa, huku, huku pane yegungwa munyu, huku pane munyu, gungwa munyu chichi, huku mumunyu, huku yekubika, mapikicha, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pfungwa inonakidza yeanonzappetizer. Unoda mazai akabikwa zvakanaka ...
Mune mumweya wetsika dzeKisimusi inoraira kuvapo kwechingwa chakagadzirwa nemaoko, isu takasarudza ...
Chingwa chose kana keke
Mufflet, Mufflet, Mufflet, Mufflet nevamwe, zvichienderana neraki, iri kutenderera ...
Pineapple keke ndeyechinyakare uye inonyanya kudiwa American dessert. Sezvo pastry ...
Pink Zebra Keke
Iko kunakidzwa kwekunwa kwekudya kwakarongedzwa uye kwakashambwa chikafu kunoenzaniswa ne ...
Mitsva mitsva yemakonzo
Mumwedzi inodziya yegore muviri unoda chinyoro uye chine jusi chikafu. Matango ari ...
Meatballs ane akadhiza mazai
Mazai akachengeterwa mazai anowanzoita appetizer, asi uchishandisa ivo pachezvawo zvinhu zvekurongedza boiler ...
Fry rakabvarukaado mbatatisi
Pfungwa iyi inoratidza inonakidza nzira yekubika yakabikwa mbatatisi ne spiral & quo ...